सामाजिक सञ्जालमा लाइभ आएर यस्ताेसम्म भनेपछि ट्राेल बनिन रीमा विश्वकर्मा, क्यानहरूले के गरे ? — Imandarmedia.com
काठमाडौं । माेडल रीमा विश्वकर्मा ट्रोलको शिकार भएकी छिन् । उनले फेसबूक लाइभमा प्रशंसकसँग कुरा गर्दै कालो चिया बनाउन सिकेको बताएपछि उनलाई सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनेकी छिन् । कतिपयले भने यसलाई रीमाको हिट हुने काइदाका रुपमा अर्थ्याएका छन् ।
जे होस्, यो ट्रोलले रीमालाई चर्चामा भने ल्याइदिएको छ । फिल्ममा खासै सफल नभए पनि रीमा होस्टका रुपमा रियालिटी शो मा भने जमेकी छिन् । हालै उनी ‘कमेडी च्याम्पियन’ को होस्ट बनेकी थिइन् ।
नेपाली कलाकारहरु किन तारिफ मात्र खोज्छन् ?
नेपालमा फिल्म राम्रा नबन्दा विदेशी फिल्म झनभन्दा झन हाबी भइरहेका छन् । केही समय हिन्दी फिल्मले पकड जमाएको नेपाली फिल्म बजारमा आजभोलि हलिउड पनि हाबी भएको छ ।
नेटफिल्मका सिरिज हेर्ने दर्शक ह्वात्तै बढेका छन् । नेपालमा भने दर्शकलाई नै नेपाली फिल्म सिफारिस गर्न हम्मे पर्ने गरी फिल्म निर्माण भइरहेका छन् । नेपाली फिल्ममेकरले राम्रा फिल्म नबनाएको भन्दै दर्शकले नै गाली गर्ने गरेका छन् । दर्शकले नै फिल्म इग्नोर गर्न थालेपछि फिल्म बनाउनु र नबनाउनुमा के फरक पर्ला र !
अझै पनि एक वर्गले ‘छक्का पञ्जा’ जस्ता फिल्महरु मन पराइरहेको छ । केही फिल्म हिट पनि भएका छन् । युवास्टार भनेर कहलिएका अनमोल केसी, प्रदीप खड्का लगायतका फिल्मले पनि हावा खाएका छन् । नेपाली फिल्ममेकरले अझै स्तरीय फिल्म बनाउनुपर्ने जोखिम छ तर मेकर भने राम्रा फिल्म बनाउनभन्दा पनि गाली गर्नेको मुख थुन्नतर्फ लाग्छन् ।
त्यसो त नेपालमा समीक्षा गरेकै भरमा पनि धम्की आउने गरेका उदाहरण छन् । कसैले फिल्म राम्रो भएन भन्यो भने शूटिङमा यति दुःख पाएको, यस्तो भएको भन्दै फिल्मको बचाउ गर्न निर्माता निर्देशक तर्सिन्छन् । केही समयअघि निकै नै अत्यासलाग्दो फिल्म निर्देशन गरेका मिलन चाम्सले यो फिल्मको विरोध गर्दा एक जनालाई हिरासतमा नै पुर्‍याएका थिए ।
फिल्ममेकर राम्रा फिल्म बनाउन पनि नखोज्ने र फिल्म नराम्रो भयो भन्दा पनि सहन नसक्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । हालै हलमा रिलिज भएको फिल्म ‘अनुराग’ की नायिका एलिजा गौतमले एक पेजले फिल्मलाई गाली गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लामो टिप्पणी दिएकी छिन् ।
उनले स्टाटसमा सानो बच्चा हुँदाहुँदै फिल्म खेलेको, मेहनत गरेको तर पहिलो फिल्ममा नै गाली गरेको भन्दै गुनासो गरेकी छिन् । कलाकारले सामान्य गालीलाई नै पचाउन सक्दैनन् भने भोलि अहिले बन्दै आइरहेका भन्दा राम्रा फिल्म कसरी बनाउँछन् ? ‘कसैले फिल्म राम्रो छैन भनिदियो भने ‘एक्सन’ लिने कि त्यसलाई फिल्म मेकिङ सुधार्ने हो?,’ दर्शकले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
अभिनेत्री करिष्मा मानन्धरले नेपाली फिल्ममा काम नगरेको लामो समय भइसकेको छ । केही वर्षयता उनी आफ्नो अपूरो पढाइ पूरा गर्ने धाउन्नमा छिन् ।
राजनीतिमा समेत लागेकी करिश्मा आजभोलि भने कुनै पार्टीसँग आवद्ध छैनिन् । नयाँ शक्ति पार्टीबाट राजनीति गरेकी मानन्धरले नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरमका बीचमा पार्टी एकतापछि राजनीति छोडेकी थिइन् ।
करिष्माको यो स्टाटसमा नायिका रेखा थापाले पनि सहमति जनाइन् । उनको भनाइ थियो, ‘अरुले यति दिए उति दिएनन् भन्नुभन्दा सक्नेले दिऔं, नसक्नेले मागौं ।’ यता करिष्माले यो स्टाटस सामाजिक सञ्जालबाट हटाइसकेकी छिन् ।